Muxuu ka dhigan yahay Mooshinka laga keenay Xaaf Ducaale? - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Muxuu ka dhigan yahay Mooshinka laga keenay Xaaf Ducaale?
October 13, 2018 October 13, 2018 admin580
khilaafka Galmudug ayaa yeeshay waji cusub kadib markii qaar ka mid ah xildhibaanada garabka Dusmareeb ay mooshin ka gudbiyeen Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf.
Xildhibaano aan la xariirna ayaa ceelhuur.com u sheegay in Mooshinkan ay saxiixeen in kabadan 50 mudane, xildhibaanada ayaa u badan kuwa Ahlu Sunna, waxaana Mooshinkan imaanaya xilli horey xildhibaanada Galmudug ee Cadaado ku sugan ay sheegeen in ay xilka ka qaadeen Xaaf.
Xildhibaanadan Mooshinka keenay ayaa sababta gadoodkoodu yahay kadib is faham darro ka dhalatay liiska golaha wasiirada cusub ee xaaf xalay ku dhawaaqi rabay. arinta buuqa dhalistay ayaa ah in xildhibaanada qaar ka mid ah ka biyo diideen jagooyinka wasiirada beeshooda la siiyey. waana sababta dib loogu dhigay ku dhawaaqista golaha wasiirada cusub.
Saadaq Sheekh Yuusuf oo la sheegay in loo dhiibay wasaaradda Amniga ayaa ah kan buuqa ugu badan ka dhashay, sidoo kale Wasaaradda Qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ayaa la sheegay in loo dhiibay Cabdikaafi Qaaf oo ah gacan yaraha Macalin Maxamuud, iyadoo Wasaaraddan ay intii ay Galmudug dhisneyd uu hayey wasiir kasoo jeeda beesha Maxamuud Hiraab.
Ahlu Sunna ayaa doonaya in ay awood muuqata ku yeeshaan golaha wasiirada cusub, sidoo kale waxa ay isku dayayaan in wiiqaan awoodda Madaxweyne Xaaf, iyagoo aad u danaynaya in la dadajiyo magacaabista wasiirada, halka Xaaf ka caga jiidayo arintaan.
Hadii aan arintaan deg deg loo soo af jarin, waxay u muuqataa in Xaaf ay ku adkaan doonto xaaladu, oo hadii uu isku dayo inuu si toos ah uga horyimaado Ahlu Sunna ay xilka ka tuuraan, sidoo kale Masiirka Xaaf ayaa u eg kii Madaxweynihii hore Yemen Cali Cabdalla Saalax oo ku biiray kooxdii Xuutiyiinta kadibna markii dambe isku dayey inuu ka baxsado, halkaasna ay ku toogteen.